Ukuphupha u-kingfisher ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Eyona nto ibangela umdla ngoxomoyi yimibala yayo enemibala eqaqambileyo. Kungenxa yokuba kuxhomekeke kwimeko yokukhanya, ijongeka njenge-cobalt eluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kwi-turquoise. Kwakhona, ezi ntyatyambo zenza ukuba intlanzi kakumkani ibe yimbalasane. Olu hlobo lweentaka lufumaneka kwiindawo ezininzi zaseYurophu nakwezinye iindawo zaseAsia nakuMntla Afrika. Inokufumaneka naphi na apho kukho amanzi amatsha avulekileyo kunye neentlanzi ezincinci.
I-kingfisher ikwasoloko ijikelezwe yi-aura yento ekhethekileyo, enokuthi ibangelwe yimiphunga yayo ebethayo. Ke ngoko, kuphakama umbuzo wokuba ngowuphi umyalezo oziswa yile ntaka "ikhethekileyo" ephupheni.
1 Uphawu lwephupha «iKingfisher» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iKingfisher» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iKingfisher» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iKingfisher» - Ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha lika-kingfisher libonisa ikakhulu oko igunya lowaphuphi. Kungenxa yokuba unentlonelo enkulu kwi el mundo yeewotshi akusafuneki ukuba ucele imvume kwabanye abantu ngezenzo zakho okanye izigqibo.
Kwangelo xesha, lo mfanekiso wephupha uqulethe isikhumbuzo salowo uleleyo. Kuya kufuneka usebenzise la mandla kwihlabathi leewotshi ngokufanelekileyo nangokucinga. Kuba nokuba uyingcali enganyanzelekanga ukuba imamele abanye, usenoxanduva lwento oyenzayo.
Ukubona kookumkani abambalwa ephupheni, behamba emanzini, betolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengophawu lwenye. utshintsho olubi kubomi bamaphupha. Umzekelo, ukuba ngaphambili ubunemvakalelo yokuba isiphelo sikuphendulele, oku kuya kutshintsha ngoku. Umntu onomdla unokujonga phambili kulonwabo kunye nempumelelo.
Kwezinye iimeko, u-kingfisher njengophawu lwephupha angabonisa ukuba umphuphi ukhululekile kwaye ngokuzimeleyo uziva okanye ufuna ukuziva. Ngokwenyani, uzabalazela ukunika ubomi bakho intsingiselo enzulu. Emva koko walungelelanisa iinjongo kunye neenzame zakhe.
Uphawu lwephupha «iKingfisher» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, u-kingfisher njengophawu lwephupha ubiza umphuphi ukuba ajongane nobomi bakhe ngokuzola nangakumbi. Oku kumenza abe mkhulu emphefumlweni wakhe. indawo yasimahla nika, nto leyo eya kuthi iyidinge. Ngamanye amaxesha u-kingfisher uyaqondwa ephupheni njengesipili seminqweno yalowo uleleyo, izimvo neengcinga zakhe.
Umfuziselo wephupha "u-kingfisher" unokwenza ulangazelelo ngqalelo ukutyhila. Unqwenela imbonakalo entle kwilizwe elivukayo, eliza kutsala umdla womntu wonke kwaye bathulise abantu bakho abanomona.
Ukuba u-kingfisher omnye okanye abaninzi bavela ephupheni, oku kungabonisa ukumangaliswa okanye utshintsho olothusayo kubomi balowo uphuphayo.
Iphupha lika-kingfisher linokufuzisela ukuba umntu olalayo unento elungileyo izixhobo zengqondo kufuneka inyuke. Ngale ndlela, unokuvumela amandla angalunganga ukuba azihambele ngokwakho ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «iKingfisher» - ukutolika kokomoya
Ukuba umntu ujonge uphawu lwephupha "iKingfisher" ukusuka kwindawo egqithileyo, lo mxholo wephupha ungabonisa imvakalelo yomzuzu olungileyo.
Xa uphupha, amandla akho kufuneka inyathelo elikhawulezayo qaphela xa kukho imfuneko.
Iphupha malunga nemifuno